izinto zokuthenga - ALinks
Amanqaku ngezinto zokuthenga
Eyona calculator yezenzululwazi yabafundi bobunjineli
January 10, 2022 IShubham Sharma Indiya , izinto ukuthenga
Ibango lezixhobo zokubala zesayensi liyakhula njengoko inani labafundi kunye neengcali ezifundela ubunjineli kunye netekhnoloji yengcaciso ikhula. Nceda ubone olu luhlu lungezantsi kwezona zibali zibalaseleyo zeNzululwazi ngobunjineli kunye neeklasi zoyilo, kubandakanya iCasio Scientific Calculators kunye
Eyona ubhaka ukuhamba eYurophu
Julayi 9, 2021 IShubham Sharma iYurophu, izinto ukuthenga, hamba, UK
Kukho iingxowa ezininzi zokuhamba kunanini na ngaphambili kwintengiso - nto leyo emnandi kuba abenzi beebhegi ekugqibeleni bayaphendula kubahambi njengathi abafuna ukhuseleko, ukusebenza, iidolophu kunye neengxowa zokuhamba ezinomtsalane. Kwaye silapha ukunceda
Izinto ezihonjiswe kakhulu ekhaya ezingaphantsi kwama-500! Jonga apha!
Julayi 9, 2021 UKaruna Chandna izinto ukuthenga
Ukuhonjiswa kwasekhaya kubalulekile kuba kuchaphazela ukuzijonga ngokwakho kwimveliso. Ke, qhubeka, uthenge umqamelo omtsha okanye ubugcisa ukuba uyonwabile. Awuziphathi ngokwakho, wenza imeko apho unokuba lolona hlobo luhle!
Esona Somlomo siBalaseleyo ku-India 2021
Juni 23, 2021 IShubham Sharma Indiya , izinto ukuthenga
Ezinye zezinto ezisebenza nzima kakhulu onokuzithenga zezona zithethi zikrelekrele zika-2021. Ziyasinceda sisebenzise izixhobo zethu ezikrelekrele zasekhaya, sidlale umculo kwaye sinike abancedisi belizwi ngeyona mibuzo isisiseko, icacileyo okanye iphazamisayo. Kulula ngoku
Ubhaka wabasetyhini ohamba phambili wokuhamba uqhubeke
Juni 23, 2021 UMaitri Jha izinto ukuthenga, hamba
Ukufumana ubhaka wokuhamba ofanelekileyo kunokuba nzima ngeendlela ezininzi ezikhoyo. Kungenxa yoko le nto ndidibanise uluhlu lweyona ngxowa intle yokuhamba kwabafazi ukwenza ubomi bakho bube lula! Ibhegi efanelekileyo yabasetyhini ibetha umxube phakathi kwefom
Ufumana njani umsebenzi eBombay?
Juni 16, 2021 UAntika Kumari imisebenzi, izinto ukuthenga
KwiMumbai, unokufumana umsebenzi kwiiyure nje ezingama-24. Faka usetyenziso lwe-Apna kwaye ugcwalise iprofayile yakho. Unokukhangela imisebenzi ngaphezulu kwe-70 iindidi emva kokugqiba iprofayile yakho, kubandakanya iAccounting, Admin, Back-office,
Eyona RO ingaphantsi kwe-10000
Juni 15, 2021 IShubham Sharma Indiya , izinto ukuthenga
Njengokuba sonke sisazi ukuba kubaluleke kangakanani ukusela amanzi aneleyo ukuze siphile ngendlela esempilweni. Nangona abantu abaninzi benabahambisi bamanzi kwisikhenkcisi sabo, nangona abanye babo bexhomekeke kumanzi apompo afanelekileyo. Ukuba u
Eyona sunscreen yehlobo ilungileyo kulusu olunamafutha
Juni 15, 2021 UMaitri Jha izinto ukuthenga
Ukuba ulusu olunamafutha, umgubo okanye i-gel-based sunscreens zezona zikhetho zibalaseleyo. Sebenzisa i-creamier enye ukuba unesikhumba esomileyo. Ngoluhlu lwe-15, i-93% ukuya kwiipesenti ezingama-97 zemitha yelanga ivaliwe. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba
Eyona toner yolusu oluqhelekileyo lwamabala amabala ehlotyeni
Juni 14, 2021 UMaitri Jha izinto ukuthenga
"Isalicylic acid toners zilungile kulusu olunamafutha okanye amabala," utshilo ingcali. Ukuba unesikhumba esomileyo, i-glycolic acid toners inokukunceda ufumane i-hydration kunye ne-exfoliation oyifunayo. Okokugqibela, ukuba ulusu lwakho lubuthathaka ngokwenene, itoner
1 2 3 ... 11 I zithuba ezilandelayo»